फन्टहरू - Print Peppermint
डिजाइन ब्लग / फन्टहरू
शब्दहरू ... तिनीहरू जताततै छन्! सही? तपाईं मुद्रित मार्केटिंग टुक्रा वा वेबसाइटमा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको मस्तिष्क पाठ र इमेजरीको केही संयोजनको स्थिर विश्लेषणमा छ। यस सेक्सनमा, हामी फन्टहरूमा हेर्छौं र कसरी टाइपोग्राफीको कडा समझले तपाईंको परियोजनाहरूलाई अझ रमाईलो र आकर्षक बनाउन मद्दत गर्दछ। कर्निंग, फन्ट साइज, लाइन उचाइ, बोल्ड, अर्ध-बोल्ड, सेरिफ, सेन्स सेरिफ - तपाइँले बुझ्नु पर्ने सबै सर्तहरू।
भर्खरका फन्ट लेख
डिजाइन विद्यार्थीहरूका लागि टाइपोग्राफी सल्लाहहरू
हामी सबै सहमत हुन सक्छौं कि हामीले पहिले नै राम्रो गरिसकेका कुरामा पक्रन सजिलो छ। ग्राफिक डिजाइन विद्यार्थीहरूको लागि पनि यही कुरा लागू हुन्छ, जसले तिनीहरूको आला पत्ता लगाउँदछ र त्यहाँ अड्किन्छ। यदि टाइपोग्राफी प्राकृतिक उपहार होईन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीसँग तपाईसँग सबैभन्दा राम्रो उपायहरू गर्न मद्दतको लागि धेरै सुझावहरू र तरिकाहरू छन्। थप पढ्नुहोस्
फन्टहरू / ग्राफिक डिजाइन / विद्यार्थी / typography
तपाइँको ब्यापार कार्डहरूका लागि भर्खरको डिजाइन इन्सिपो
यो डोसन, नगर्नुहोस्, रंगहरू, र फन्टहरू जब यो आफ्नो र तपाईंको ब्रान्डको लागि छवि निर्माणको कुरा आउँछ, व्यापार कार्डहरूले तपाईंलाई लामो यात्रा गर्न सक्दछन्। यद्यपि कागजको सानो टुक्राका लागि, व्यापार कार्ड डिजाइन गर्न एकदम कठिन छ। ब्रान्ड पहिचान देखि छवि सम्बद्ध भावनाहरू, व्यवसाय ... थप पढ्नुहोस्
फन्टहरू / typography
तपाईंको व्यवसाय कार्ड डिजाइनहरू प्रेरित गर्न फन फन्ट फ्रिन्डि। गर्दै
व्यवसाय कार्ड संरचना र टाइपोग्राफी पैटर्न उद्योग देखि उद्योग मा परिवर्तन। जबकि ती मा डाटा प्राय एक समान हो - संगठनको नाम, तपाईंको हस्ताक्षर / नाम, सम्पर्क डाटा, र सम्भवतः तपाईंको व्यवसाय वास्तवमै के हो विश्वलाई बताउनको लागि नारा। एक अप्रत्याशित व्यापार कार्ड फन्ट निर्णयले तपाइँको व्यवसाय कार्ड लाई अलग देखाउन सक्छ ... थप पढ्नुहोस्
व्यवसाय कार्ड विचार र प्रेरणा / फन्टहरू / typography
व्यापार कार्ड प्रिन्ट गर्नका लागि १० उत्कृष्ट फन्टहरू।
जब तपाईं वा तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम व्यवसाय कार्ड डिजाईन गर्दा, त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईंले विचार गर्नुपर्दछ - रंग, कागजको गुणस्तर, लोगो, कुन जानकारी समावेश गर्नुपर्दछ, साथै अरू विवरणहरू पनि। विशेष रूपमा, व्यवसाय कार्ड डिजाइनको एक धेरै बेवास्ता गरिएको पक्ष सायद फन्ट चयन हो। सहि फन्ट लिने हुन सक्छ ... थप पढ्नुहोस्
फन्टहरू / प्रिन्ट डिजाइन / typography
२०१5मा खोज्न शीर्ष Tre ट्रेंडिnding फन्टहरू
२०१5मा हेर्नको लागि शीर्ष Tre ट्रन्डि F फन्टहरू जुन तपाईं लोगो सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ वा व्यवसाय डिजाईन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं समकालीन देखिन चाहनुहुन्छ। यसको लागि, २०१ for को लागि यी ट्रेन्डिंग फन्टहरू जाँच गर्नुहोस्। केहि फन्टहरू, जस्तै हेलवेटिका, कोशिस गरिएको छ र सही क्लासिक्स। तिनीहरूको कुनै समाप्ति मिति छैन। अन्य, हास्य सान्स, जस्तै… थप पढ्नुहोस्
डिजाइन / फन्टहरू / typography
कसरी तपाइँको ब्यापार कार्डका लागि उत्तम फन्टहरू छनौट गर्ने
कसरी तपाइँको ब्यापार कार्डका लागि सर्वश्रेष्ठ फन्टहरू छनौट गर्ने के तपाइँ व्यापार कार्ड डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, तर कुन फन्टहरू छनौट गर्न निश्चित हुनुहुन्न? तपाईंको व्यवसाय कार्डको लागि उत्तम फन्टहरू छनौट गर्न जान्नको लागि पढ्नुहोस्। यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, आजको डिजिटल युगमा व्यवसाय कार्डहरू अझै फरक पर्दछ। यो सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो ... थप पढ्नुहोस्
व्यापार कार्ड आधारभूत / फन्टहरू / typography
वेब र प्रिन्टका लागि सबैभन्दा सजीलो पढ्न योग्य फन्टहरू
सबै भन्दा राम्रो १२ फन्टहरू जुन सजिलै पढ्न सजिलो छ मार्केटमा उपलब्ध केहि उत्तम फन्टहरूमा गहिराइको हेराई। सहि फन्टको खोजी हेर्दा साधारण कार्य जस्तो देखिन सक्छ जुन धेरै विचारशीलताको खाँचो पर्दैन। जहाँसम्म, त्यहाँ बाहिर राम्रो डिजाइनर को एक पर्याप्त रकम खर्च… थप पढ्नुहोस्
फन्टहरू / प्रिन्टिंग बेसिक्स / typography
सेरिफ vs. सेन्स-सेरिफ फन्टहरू, के भिन्नता छ र मैले किन ख्याल राख्नु पर्छ?
(img src: https://www.canva.com/learn/serif-vs-sans-serif-fouts/) ग्राफिक डिजाइनरहरू छनौट गर्न धेरै टाइपफेसहरू छन्। तर पहिलो चरण भनेको चरणहरू बीच छनौट गर्नु हो जुनसँग सेरिफहरू र फन्टहरू छैन जुन होईन। यस छनौटले तपाईंको डिजाईन गर्ने शैलीलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भनेर अन्वेषण गर्न पढ्न जारी राख्नुहोस्। सेरिफ के हुन्? अक्षरमा जोडिएका साना लाइनहरूलाई सेरिफ भनेर चिनिन्छ। तिनीहरू सम्भवतः उत्पन्न भएको ... थप पढ्नुहोस्
कर्निंग के हो, र म यसलाई मेरो डिजाइनहरूमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छु?
डिजाइन विस्तृत अवधारणाले भरिएको छ जुन उनीहरूको स्पष्ट सरलता भन्दा बढि महत्वपूर्ण छन्। कर्निंग यस्तो अवधारणाको उदाहरण हो। प्रकारको माध्यमबाट संचार र सौंदर्यशास्त्रमा प्रभाव पार्ने क्रममा कर्निंग शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ। यो एक उपकरण हो जुन राम्रोसँग प्रयोग गरिएको छ भने एक औसत पाठकले याद गर्दैन। कर्निंग के हो? यो… थप पढ्नुहोस्
फन्टहरू / ग्राफिक डिजाइन / typography
कसरी तपाइँको ब्यापार कार्डको लागी उत्तम फन्ट र साइज छान्ने
आकार मामिला! ठिक छ, कम्तिमा हामी यो तपाईंको व्यवसाय कार्डको फन्टको लागि सत्य हो भनेर जान्दछौं। धेरै ठुलो र तपाईले भन्न चाहानु हुने सबै कार्डमा फिट हुँदैन। ज्यादै सानो छ र व्यक्तिलाई यो लेखिएको कुरा पढ्न पनि गाह्रो लाग्छ! हो, तपाईं अब हेर्नुहोस् ... थप पढ्नुहोस्
यी परम गुगल फन्ट संयोजन एक शट दिनुहोस्
शैतानको विवरण मा निहित छ। यो फन्ट छनौट गर्न आउँदा निश्चित रूपमा सत्य हुन्छ। कसैले पनि सोचाईयुक्त शव्द ब्लगको माध्यमबाट पढ्न चाहँदैन यदि तिनीहरूलाई त्यसमा पाठ स्पष्ट पार्न म्याग्निफाइ glass ग्लास चाहिन्छ भने। उत्तम गुगल फन्ट संयोजनहरू प्राप्त गर्न, फन्टहरूको लागि जानुहोस् जुन राम्रोसँग मिश्रण गर्दछ ... थप पढ्नुहोस्
फन्टहरू / नि: शुल्क संसाधन / typography
तपाईंको ब्रान्डको लागि दायाँ फन्टहरूमा राउन्डिंग
यदि तपाईं एक व्यक्ति को रूप मा आफ्नो वेबसाइट डिजाइन को सोच रहे हैं, टाइप पृष्ठहरु तपाई भित्र जानुहुन्छ आफ्नो लेआउट को शारीरिक आकर्षण हो। त्यसो भए, पाठ्यक्रम, तपाईंले यसमा राख्नु भएको सामग्री हो जसले व्यक्तित्व बनाउँछ तर त्यो अर्को दिनको लागि विषय हो। निश्चित प्रकारको म्याग्नेटिजम र अपील एक हो ... थप पढ्नुहोस्
ब्रान्डिङ / फन्टहरू / लोगो डिजाइन / typography
नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ केहि श्युर-शट फन्ट जोडीहरू छन्
यदि तपाईले आफ्नो वार्डरोबमा कपडा मिलाउन र मिलाउन समस्या गर्नुभयो भने, दायाँ फन्ट संयोजनहरू सँगै पेयर गर्न कोशिस नगरुन्जेल कुर्नुहोस्। होइन, प्रतीक्षा गर्नुहोस्! हामी तपाईंलाई जीवनको लागि आघात छोड्ने कोशिस गरिरहेका छैनौं, हामीले केवल भनेको छ कि एक पोशाक छनौट एक केकवाक जस्तो देखिन्छ अब तपाईलाई थाहा छ के उत्तम लिने… थप पढ्नुहोस्
तपाईंको अर्को प्रोजेक्टको लागि उत्तम नि: शुल्क सुलेख फन्टहरू
यदि तपाईं सुलेख एक हराएको कला हो भने, फेरि सोच्नुहोस्। केवल नि: शुल्क क्यालिग्राफी फन्टहरूको संख्या हेर्नुहोस्, नबिर्सनुहोस्, समय र प्रयास जुन उनीहरूलाई सिर्जना गर्न जान्छ र तपाईंलाई थाहा हुनेछ कि सुलेख यहाँ रहनको लागि छ (यो आज फन्ट फाराममा भए पनि)। सहि क्यालिग्राफी फन्टहरू लिन सक्छ ... थप पढ्नुहोस्
कुन फन्टहरू वेब डिजाइनको लागि उत्तम काम गर्दछ?
यदि तपाईंले वेबमा एउटा कुरा देख्नुभयो भने, तपाईंले यो सबै देख्नुभयो। उही पुरानो, उहि पुरानोलाई पछ्याउनु भन्दा पनि किन ताजा र बोल्ड हुँदैन? किन नगर्नुहोस्, समय निकाल्नुहोस् जुन तपाईंको वेब डिजाइन हो जुन तपाईको डिजाईनबाट हटाउनु भन्दा उत्तम थोरै वेब फन्टहरू हुन्। यदि तपाइँलाई पत्ता लगाउन समस्या भइरहेको छ भने ... थप पढ्नुहोस्
ध्यान दिनुहोस्: व्यापार कार्डहरूका लागि Best उत्तम फन्टहरू
लोगोहरू, ग्राफिक डिजाइनहरू, र व्यापार कार्डहरू के समान छन्? सरल: यो फन्टहरू उनीहरूको विभिन्न डिजाइनहरूमा प्रयोग गरियो। तपाईको ब्रान्डिंगका लागि प्रयोग गरिएको फन्टहरू र तपाईको कम्पनीसँग सम्बन्धित सबै तपाईको सफलताको लागि अविभाज्य छन्। धेरै व्यक्तिले यी चीजहरूमा ध्यान दिदैनन्, तर ती महत्त्वपूर्ण छन्। यदि तपाईं ग्राफिक डिजाइनका लागि बजारमा हुनुहुन्छ भने,… थप पढ्नुहोस्
व्यापार कार्ड आधारभूत / फन्टहरू / मुद्रण / typography